JAWAARI: Puntland oo keliya ayaa ah Dowlad Goboleed - Inta kalena waa Maamul Goboleedyo. - Wargeyska Faafiye
Home 2015 August 31 .Warka JAWAARI: Puntland oo keliya ayaa ah Dowlad Goboleed – Inta kalena waa Maamul Goboleedyo.
JAWAARI: Puntland oo keliya ayaa ah Dowlad Goboleed – Inta kalena waa Maamul Goboleedyo.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamed Sh. Cusmaan Jawaari ayaa sheegay inaysan dalka ka jirin wax Dowlad-goboleedyo la yiraahdo, laakiinse ay yihiin Maamul-goboleedyo, isagoo sheegay in Maamul-goboleedyadii Dhawaan la sameeyay ay ahaayeen kuwo go’aan siyaasi ah oo aan sharci ahayn lagu dhisay.
Jawaari ayaa arrintan ku sheegay su’aalo shalay lagu weydiiyay shirka dib loogu eegayo dastuurkad dalka ee ka furmay Muqdisho, isagoo xusay in in wax badan la isku qaldo oo ah dowlad-goboleed iyo maamul-goboleed, taasna aanay wax sax ah ahayn.
“Waxaan jeclahay in hal arrin si fiicacn oo fahmo; waxaa jira raadiyayaasha & Siyaasiyiinta inay wax badan Qaldayaan, Annaga Arrimahan waxaa ku fiirinnaa indhaha Dastuurka iyo indhaha sharciga qofna ma doonayno inaan ka careysiino, qofna ma doonayno inaan ka qosolsiino, wax la yiraahdo Dowlad-goboleed ma jiraan,” ayuu yiri Jawaari.
Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inay gaari ku gubtay Ceelbuur.
Dilal fool xun oo ka dhacay Kismaayo